DEG-DEG: 11 Kooxood Oo Saxeexay Samaynta Koobkii Burburinayey Champions League & Jawaab Degdeg Ah Oo Ka Timid UEFA & Premier League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueDEG-DEG: 11 Kooxood Oo Saxeexay Samaynta Koobkii Burburinayey Champions League & Jawaab Degdeg Ah Oo Ka Timid UEFA & Premier League
DEG-DEG: 11 Kooxood Oo Saxeexay Samaynta Koobkii Burburinayey Champions League & Jawaab Degdeg Ah Oo Ka Timid UEFA & Premier League
April 18, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa qoraal degdeg ah soo saaray kaddib markii ay 11 kooxood oo ah kuwa ugu waaweyn qaaradda Yurub ay saxeexeen qorshe lagu unkayo tartan cusub oo loogu magac daray UEFA Spuer League oo awoodda iyo xiisahaba ka qaadaya Champions League.
Kooxaha heshiiska saxeexay oo ay ka mid yihiin shanta kooxood ee ugu waaweyn horyaalka Premier League, ayaa waxa kale oo jawaab ka bixiyey maamulka horyaalka Premier League.
UEFA ayaa rajaynaysay in tartanka Champions League ay u dhigto qaab cusub oo ay ka dhigto 36 kooxood, waxaana qorshahaas loo fadhiisan doonaa ansixintiisa maalinta Isniinta.
Laakiin waxa kasoo hormaray arrin kale oo ah in kooxaha waaweyn ee Yurub ay qalinka ku duugeen in ay samaystaan tartanka Super Cup oo loo ciyaarayo sidii Champions League oo kale, kaas oo ay ka helayaan lacago badan.
Kooxaha qorshan watay oo ay ugu horreeyaan Real Madrid iyo Manchester United ayaa waxa uu saamayn badan ku yeelanayaa Champions League oo uu ka qaadi doono xiisaha, maadaama naadiyada waaweyn ay iskugu tegayaan tartankan cusub.
11ka kooxood ee heshiiskan saxeexay ayaa waxa kale oo ka mid Liverpool, Arsenal, Chelsea iyo Tottenham oo dhamaantood Ingiris ah. Waxa kale oo qalinka ku duugay Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Inter Milan iyo Barcelona, kuwaas oo lagu darayo labada kooxood ee hore ee Manchester United iyo Real Madrid.
Kooxo kale ayaa la filayaa in ay kusoo biiraan, isla markaana ay tiradu noqoto illaa 20 kooxood oo ah kuwa ugu waaweyn Yurub si uu u hirgalo tartankan.
Naadiyada la sugayo in ay kusoo biiraan ayaa waxa ka mid ah Lyon, Borussia Dortmund, Manchester City, Roma iyo kuwo kale.
Dhinaca kale, laba war-saxaafadeed oo ay soo saareen UEFA iyo Premier League ayay ku cambaareeyeen qorshahan ay kooxahani ku samaysanayaan tartanka cusub ee UEFA Super League oo ah mid ka madax-bannaan Champions League.